नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अमेरिकामा घर किन्ने सुबर्ण मौका !
अमेरिकामा घर किन्ने सुबर्ण मौका !
2008 र 2009 मा अमेरिकामा घर किन्नेहरुले आफ्नो लगानीको करिब दोब्बर बनाउन लागे । घरको बजार भाउ बढ्दै गैरहेकोछ, दुई लाखका घर किन्नेहरुले चार लाख डलर बनाउन लागे । आगामी तीन बर्षको सेरोफेरोमा घरको भाउ यसरीनै बढ्दै जाने अनुमान बिभिन्न सर्बेक्षणहरुले देखाएका छन । यदी तपाईंसँग दुई बर्ष भन्दा बढी काम गरेको Work History, 700 आसपास क्रेडिट स्कोर र महिनामा परिवारको3हजार डलर भन्दा माथि आम्दानी छ भने तपाईंले आम्दानी अनुसारको घर किन्न पाउनुहुन्छ*। त्यसका लागि तपाईं सँग मात्र 3.5% Down Payment भए पुग्छ । ढिलो नगर्नुस् मौका यही हो घर किन्ने । भन्छन मौका आउँछ, पर्खिदैन, बगेको खोला फर्किंदैन ।
For detail information you can contact
Realtor / Notary Public, Virginia-US
Call : 703-419-0924 or
(This Ad. is for those people who legally live and work in US, Please do not respond from out side of US)